Raw Arnica Montana ntụ ntụ ndị na-eweta ihe ọkụkụ HPLC≥98% | AASraw
/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / Arnica Montana ntụ ntụ
Category: R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Arnica Montana ntụ ntụ, n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Arnica Montana ntụ ntụ na-egbu egbu mgbe ejiri ike zuru ezu, ma enwere ike iji ya mee ihe dị ka mmanu, gel ma ọ bụ ude na akpụkpọ anụ ma ọ bụ buru n'ime ụlọ mgbe a na-atụgharị ya n'ụlọ. Arnica emeela ka ọ bụrụ otu n'ime ụlọ ndị kasị ewu ewu na homeopathic na ụwa dum ....
Arnica Montana ntụ ntụ video
Arnica Montana ntụ ntụ bụ isi Characters
aha: Arnica Montana ntụ ntụ
Aha ndị ọzọ maka Arnica Montanaare Mountain daisy, ụbọ akwara Leopard na ụtaba ugwu.
Raw Arnica Montana ntụ ntụ
E nweghị ọkọlọtọ Arnica Montana na-emepụta ọgwụ ma ọ bụ ụdị ọgwụgwọ ọ bụla a na-atụ aro ya; e nwere ọtụtụ doses dị iche iche maka ejiji dị iche iche. A ghaghị iji nlezianya soro ndị ọkachamara na-ahụ maka nlekọta ahụike, na ị ga-agụkwa aha ngwaahịa ahụ nke ọma tupu ewere ihe ọbụla.
Arnica Montanais na-egbu egbu mgbe a na-ekwu okwu ọnụ ma ọ gwụla ma a na-atụgharị ya na dosopathic doses such as 30X or 200D.
Ịdọ aka ná ntị na raw Arnica Montana ntụ ntụ
Homeopathy bụ usoro na nkà mmụta ọgwụ nke dabeere na ihe a na-akpọ "ọgwụgwọ-dị ka" ụkpụrụ, bụ ihe eji eme ihe mgbaàmà na onye ahụike dị (na obere ala) iji na-emeso otu ihe mgbaàmà ahụ kpọmkwem onye na-arịa ọrịa. Ya mere, na homeopathy, ọgwụgwọ na-eme ka ọ dị irè karị mgbe a na-agwakarị ha: 200C nwere ike karịa ntanye 6C.
A na-ejikwa Arnica Montanacan mee ka ike ghara ịkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ na-anya ụgbọ elu. Onye ọ bụla nke na-echifịa n'ụzọ dị mfe ga-enwe ekele maka ikike Arnica Montana nwere iji belata nchọpụta ahụ.
Iji nyere aka naghachi site na obere mmerụ ahụ, nhụjuanya ma ọ bụ ịwa ahụ, Arnica Montanais ga-emerịrị maka ụlọ ọgwụ ọ bụla. Ma ị bụ nwa ọhụrụ na-agba ume, ọ bụ onye agha izu ụka ma ọ bụ onye na-egwu egwuregwu, ọ bụ azịza zuru oke maka obere mmerụ ndụ niile.
Esi zụta Arnica Montana ntụ si AASraw
1 nyochaa maka Arnica Montana ntụ ntụ
Arnica Montana ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi